Tora-pasika malaza, rano mangatsiaka sy tantara bitika no mahatonga ny Andamans ho safidy tsara ho an'ny vakansy miala sasatra sy mahafinaritra, miaraka amin'ny fety lava, miresaka any amin'ny ranomasimbe nosy ary noho ny fisidinana an-dranomasina lalindalina kokoa. Avy any amin'ny tanàn-dehibe marolafy any Port Blair mankany amin'ireo tora-pasika fotsy maloto ao Neil sy Havelock ary ny lava-bato ao Diglipur, ny Andamans dia manome zavatra ho an'ny mpizahatany rehetra. Manana ny sasany amin'ireo torapasika mahafinaritra indrindra any Azia izay mivoaka avy ao amin'ny sarimihetsika paradisa tropikaly na sarimihetsika gazetiboky iray. Ireo vondrona Nosy ireo dia iray amin'ireo faritra lavitra indrindra amin'ny planeta. Ity lalana ity dia hanome fahafahana anao hijery any amin'iny torapasika iny ary hanana vakansy miala sasatra.
05 alina / andro 06 | Tour Code: 030
DAY 01: MANDRESY PORT BLAIR
Rehefa tonga ny seranam-piaramanidin'i Port Blair, ny solontenantsika dia handray sy hiditra ao amin'ny hotely. Taorian'ny fanamarinana tao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny fialan-tsasatra kely, dia hanomboka ny fitsidihana amin'ny Museum Anthropological, izay maneho ny fitaovana, modely an-trano, zavakanto ary asa tanana avy amin'ireo foko teratany avy ao Nosy Andaman & Nicobar avy eo amin'ny Museum Anthropological, dia mankany amin'ny Corbyn's Cove amoron-dranomasina. Fihetseham-po amin'ny lamaody sy feo amin'ny fonjam-by: Nandritra ny hariva, nifindra tany amin'ny Fandefasana ny Fahazavana Light and Sound tao amin'ny fonjan'ny fonja izahay izay nahatonga ny zavamahadomelina ho an'ny ady an-trano.
DAY 02: PORT BLAIR - Nosy ROSS - NOSY NORTH BAY (KILALA ISLAND) - HARBOR CRUISE (ANY VIP)
Androany, aorian'ny sakafo maraina dia hiasa mandritra ny tontolo andro iray mankany amin'ny Nosy Ross, ny Bay Bay Avaratra (Coral Island) ary ny Viper Island (Harbour Cruise). Nosy Ross: Voalohany dia manomboka ny dia lavitra (sambo) mankany amin'ny Nosin'i Ross, renivohitry Port Blair renivohitra nandritra ny fitondrana britanika, izy izao dia mijoro am-pahibemaso, miaraka amin'ny rafitra efa saika potipotika. Ny tranom-bakoka kely dia mampiseho sary sy antikelon'ny britanika, mifandraika amin'ireo nosy ireo. Bay Bay (Nosy Coral): Avy any amin'ny Nosin'i Ross dia mankany amin'ny làlana mahafinaritra mankany amin'ny nosy Bay Bay (Nosy Coral) isika izay manome trondro maingoka sy trondro ary ny fiainana an-dranomasina ambanin'ny ranomasina. Azontsika atao ny mijery ireo vatohara manintona sy ny fiainana an-dranomasina amin'ny alàlan'ny fitaterana anaty sambo ety ambany sy snorkeling (fakan-kevitra). Harbour Cruise (Nosy Viper): Nankany amin'ny seranan-tsambo izahay, ny fomba fijery ny toerana fito avy any an-dranomasina, ny seranan-tsambo, ny dian-drivotra, sns, anisan'izany ny fitsangatsanganana ny nosy Viper.
DAY 03: PORT BLAIR - ISLANDY HAVELOCK
Androany, manomboka ny dia mankany amin'ny Nosy Havelock isika amin'ny alalan'ny sambo avy any Port Blair Harbour. Rehefa tonga any amin'ny Nosy Havelock, ny solontenantsika dia handray sy hanentana anao hitsidika ny toerana. Fialam-boly an-kalamanjana any amin'ny Nosy Havelock: fitsangantsanganana sns ho any amin'ny Elephant Beach: Rs.750.00 Per olona (tafiditra ao anatin'ny fitaovam-pitaterana manokana, fitaovana torolàlana & snorkeling)
Aorian'ny sakafo maraina dia mankany Radhanagar Beach (Beach No. 7) izahay, ny Time Magazine dia nanome ny tora-pasika tsara indrindra any amin'ireo torapasika tsara indrindra any Azia. Io no toerana tsara indrindra hialana amin'ny ranomasina, fandroana rano ary mipaoka ny moron-dranomasina. Aorian'ny mitataovovonana dia miverina any Port Blair isika (amin'ny alàlan'ny fiaramanidina) sy ny fijanonana mandritra ny alina ao Port Blair.
DAY 05: PORT BLAIR - FAHASALAMANA MAIMAIM-POANA - FIVORIANA
Taorian'ny sakafo maraina dia nentinay ho amin'ny fitsidihana ny tanànan'i Port Blair izay mandrakotra ny fonjan'i Cellular (National Memorial), i Chatham dia nahita mozika (mozambitsy tranainy indrindra sy lehibe indrindra any Azia), Museum of Forest, Samundrika (Naval Marine Museum), Science Center, Gandhi Park , Marina Park, Andaman Water Sports Complex. Fivarotana: Amin'ny hariva, mankany Sagarika isika (Govt. Emporium of Handcraft) ary tsena ao an-toerana mba hividy.
Alefaso any Port Blair / Harbour mba handehanana miverina miaraka amin'ireo fahatsiarovana mahafinaritra.